SingForYou.net - Chit San Eain
Chit San Eain
Tags : Home Sweet Home ..... BABY
By : MH on Mar 24, 2010
Score: 113 Rating: 4.91 Comments: 38
Chit San Eain's Description
MH ရဲ့ ခက်ခက်ခဲခဲ ၅၀ ပြည့် သီချင်းပါ။ ဖီးလ်လာသလို ဆိုလိုက်တယ်။ ရင်ဘတ်ထဲတော့ ရေလည်ငြိနေတယ်။ စာသားတွေအကုန်ကြိုက်တယ်ဗျာ ။သူ့မျက်နှာကို ငေးမောရင်း .....ကိုယ်သိပ်ချစ်တာပဲ ..... တိုးတိုးလေးညည်းရင်း ................။
saikyaw on Mar 26, 2010 0
လိုက်ဘူးညီနဲ့..အမှန် အတိုင်းပြောတာ..ညီ နဲ့ လိုက်မဲ့ key နဲ့ဆိုရင်တော့ ကောင်းမှာ..slow rock လို ၊ လေးဖြူ အ ငဲ တို့ ရဲ့ သီချင်းအေး လေးတွေ ကို ညီဆိုရင် အားပါး..တကယ် ကောင်းတာ. ဒါပေမဲ့လဲ တခါတလေတော့ ကိုယ်feelလာသလို ဆိုလိုက်ရတာလေးကလဲ အရသာ ရှိတယ် လေ ပရိသာတ် လက်ခံ မလက်ခံ ကတော့ ထားလိုက်တော့ ဟုတ်ဘူးလား
seven on Mar 25, 2010 0
~~Bro 10 ရေ...ဆိုသွားတာအရမ်းကောင်းတာပဲ.. ********************************!!~~..
MOENGE on Mar 25, 2010 0
Wow.........great sound , always forever**************
susannyunn on Mar 25, 2010 0
d lo kya tot lelz.....athan ka soft thwar pan yaw......;P ... sai MH yay......ayan nit tat te song lay par....xo touchinggggggggggg!!!!......................................********************************************************************************
forevermoe on Mar 25, 2010 0
Bro MH yay ..d ta khar tot aye aye lay so twer par lar..ta kal ko full mood gyi nae hit twer tarr ta kal kgtal...ma moe arr pay twer par tal shinn..**********************
u4gyi on Mar 24, 2010 0
MH's 50th song @ SFY is so kool and easy listening lay ber.. you choose the right song nice bro MH yay*****..4 your perfcet sang 50th song
a yan ko listen loz kg par tel ... arr pay thwar par tel .... 5*4u :-)
သံစဉ်လေးရော..စာသားတွေရော..bro ဆိုထားတာ ရော ရေလည်လန်းတယ်ဗျာ...
ဟီးးးးးးးးးး.. စာသားရော.. အဆိုရော.. ဒါကြောင့်ကောင်းနေတာကိုး.. ကွက်တိထိသွားတယ်ပေါ့.. သူငယ်ချင်းရေ.. အားပေးသွားပါတယ်.. 5*********** ခင်မင်လျှက်.. ကောင်းထက်
ko thate chit tar bae......toe toe lay nyiee yinn tae.......nit tway kyar lar yin.......kizar thachin pyaung so nay ya mal(lat thee sote ma lar.....lat warr phyant ma lar)........ayann ko kg tal MH yay......*******
wow so coollllll ********!
whitesweety86 on Mar 24, 2010 0
a yan kyite tal so twar tar............**********
lalaynge on Mar 24, 2010 0
MH ရဲ့၅၀ပြည့်သီချင်းကို ခက်ခက်ခဲခဲ လာအားပေးသွားပါတယ်..******
a yan kg par tal.....congratulation! for your 50th song.........:)*******
wadanar on Mar 24, 2010 0
သူ့မျက်နှာကို ငေးမောရင်း .....ကိုယ်သိပ်ချစ်တာပဲ .....ိုတိုးတိုးလေးညည်းရင်း ...... ခံစားချက်တွေပိုပြင်းလာသလိုပဲနော်..ဟီးဟီး....
skywalker on Mar 24, 2010 0
ရှုးရှဲ ရှုးရှဲ နဲ့ အသက်ငင်နေတာ ...ဆေးမမှီတော့ ဘူးဗျို့ ......ဟဟ
MH on Mar 24, 2010 0
ပြင်းသလားမမေးနဲ့ ဘော်ကြီးရေ ... ရှုးရှဲ ရှုးရှဲ နဲ့ ဒီဇယ်စက်ခေါင်းမှုတ်သလိုပဲ ဟဟ။
so nice as usual ...*****4u par.
ကိုချစ် .... Thanks ဗျာ ။ *************
ta gae ko mite tae, **************************************** for you bro!!
အောင်မယ် ကြူစရာမရှရင် မရှိဘူးပြောစမ်ဘာ ..နာ့ ကို တရားခံရှာနေတယ် ...ဒဿနော် နာမယ် ဟင်းဟင်း
တားတား လိမ္မာနေပါပြီဂျ .... မိုက်တော့ဘူး။ ဘီယာတွေလဲသောက်ဘူး ( လကုန်ရက်နီးပြီမို့ ) ... ကောင်မလေးတွေနဲ့လဲ ကြူတော့ဘူး ( မယ်သီတာကြောက်လို့ )
battousai-x- on Mar 24, 2010 0
အမလေး..ဒဿ မှ ဟုတ်ပါလေစ ...ညည်းထားလိုက်တာ တကယ့်ကိုကောင်း ...ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ ဘူး ...ပြောတော့ ပါဘူး..မပြောလည်းသိတယ်ဟုတ်...ဟဟ
ဘာပြောရမှန်းသိဝူးလား ......... နင်နော် နင်တိတာ ငါတိတယ်။ ပြောစရာရှိပြောတာဟုတ်ဘူး ။ ဒါ ဘီ ဒု ဘီ ဒူ ဒပ် ဒပ် .....
KoBurma on Mar 24, 2010 0
................................##............#,............ဟေးးးးး..ညလေးးးး... ..............................###.........##,...........#,........................ ..............................###........###.........##........................ .........Very.Good......###.......###........###......၅စတားစ်...... ..............................###.......###.......###......................... ..............................###,.....###......###.......................... ..............................###,....###......###............#,............ .......From..KoBurma..###....###......###,........##,............. ................................###..####....###........###............. ....######................########..###......###.............. ........######............############....###............... ............#####=......#################................. ................#######################................... ..................#####################...................... ....................###################........................ ......................#################........................... ......................################............................. ........................##############................................ ..........................############................................... ..........................###########..................................... ဩ .... ဒါနဲ့စကားမစပ် ကိုအောင်ရင့် သမီးလေးက ... Innocent ပုံလေး ... တော်တော်ချစ်ဖို့ ကောင်းတာပဲ .... ကိုယ့်ညလေးလို သဘောထားပြီး ပြောတာပါ .... :P:):D
လူဆိုး ... နာဆိုတာမကြားဘူး ။ ညလေးပဲမြင်တယ်။ ညလေးအကြောင်းပဲပြောသွားတယ်။
pp01 on Mar 24, 2010 0
Bro MH ko..pyan lar arr pay pyii.. EXCELLENT as usual:D*****
PP ... ပြန်လည်အားပေးသွားတာ သိုင်းကရူး.............
AYE AYE LAY SO YA DE' SONG KYA DORT....VOCAL KA..MA HTWAT DORT BUU.....THAT WAS YOUR SOFT VOCAL ??? LOVE IT....GREAT AS EVER..!!!
ဟိဟိ ... ဒါအပျော့ဆွဲမဟုတ်ဘူး။ ဂျကားပြောသလောက်လေး ညည်းထားတာ ။ ဒီထက်ပျော့ရင် ပြဲသွားရော ဆိုလို့ရတော့ဘူး။
sumyar on Mar 24, 2010 0
MH yay sumyar arr pay twar tal naw.... nice par. but myogyi doz lo song myo nae po lite tal....5* naw
အော်ပါ့မယ် အော်ပါမယ် ...အောင်မငီး ။ ဒီနေ့တော့ ပျော့ပျော့လေးပဲနားထောင် အားပေးထားဦး ။
joeyouke on Mar 24, 2010 0
Bro..MH yae....sis joeyouke arr pay twar par tal nor....a yanaso kg te' broatwat 5* pe' nor bro...:clap...
အိုးပုတ် ဂျိုးရုပ် ..... အမြဲအားပေးတဲ့ ညီမလေးကို ကျေးဇူးတသန်း ...................